Yimuphi umkhumbi ohlukile e-yacht: umehluko
Izimoto zamanzi zinomthamo omkhulu, kusukela ezikebheni ezivamile kuya kuma-liners nama-ferries. Phakathi kweyunithi ekhululekile futhi efinyelelekayo, izikebhe nama-yachts ziyathandwa. Zihlukaniswa ngezici eziningana. Isigaba sama-motorboats sihlanganisa imikhumbi eneyunithi yamandla enamathela. Izikebhe zihamba ngezinsimbi ezisetshenziswayo, futhi amakilasi amade anezimoto ezinamandla noma izithuthi zinikezwa ekilasini lama-yachts.
Uyini umehluko phakathi kwesikebhe ne-yacht?
Isikebhe siyisitsha esiphakathi kwamamitha amahlanu namashumi amane ubude, esisebenza ngenani lemoto ehleliwe noma egibele. I-yacht cishe ubude obufanayo. Kodwa akuhloswe ukuthuthwa kwempahla noma imisebenzi yokukhulula, kodwa ihloselwe kakhulu ezemidlalo noma ekuhambeni. Ama-Yachts ahlukaniswe ngezigaba eziningana:
Indlela yokuhamba ngomkhumbi.
Esinye sezici eziphawulekayo ze-yacht ukutholakala okudingekayo kwamakamelo namakamelo, kanye nokukwazi ukuhambisa umkhumbi ngamagesi anamandla amakhulu kuze kufike kumahhashi angu-300. Umehluko phakathi kwe-yacht kanye nesikebhe nawo uyashesha. Isitsha sokuhamba ngomkhumbi sisuka emajonini angama-30 (55 km / h), kuye ngokuthi isivinini somoya kanye nesiqondiso sokuhamba. Izithuthuthu zezimoto zithuthukisa isivinini ngokuhambisana nobukhulu namandla esitshalo samandla (kufika ku-130 amakhilomitha ngehora).
Emkhunjini ohamba ngomkhumbi, lesi sibonakaliso sincike kuphela esimweni sobuchwepheshe somkhumbi, ukutholakala kwezinhlinzeko kanye nesifiso sabahambi. Ngokwehluka kwezimoto noma ngesikebhe, kudingeka ubale izinqolobane zokushisa. Kumele kuqashelwe ukuthi kuphela ukuqaliswa komkhumbi wezimoto ezijwayelekile kuzodinga okungenani amalitha ayishumi kagesi. Futhi ibanga lokulinganisa ngokuvamile liyi-1-1,5 amakhilomitha ayizinkulungwane.
Ukuze uqonde ukuthi yisiphi isikebhe esihlukile e-yacht, kubalulekile ukucabangela imingcele eyisisekelo yalezi zindawo zokubhukuda. Ukuhlelwa komkhumbi wokuqala kungamamitha, abasebenzi bahlanganisa abantu ababili, i-unit iziphatha ngokuzethemba emanzini. Ukudlidliza kanye nomsindo wemoto kuphela ongaphazamisa kancane. Uhlaka lwe-yacht lwezingqinamba ezifanayo luzoba ngamamitha angu-2.5. Umkhumbi ngokuvamile unomqulu ohlangothini olulodwa kanye nohambo olude olunikezwa okungenani ochwepheshe abathathu.
Isikebhe: ukucaciswa kobuchwepheshe
Cabanga ngemingcele yezobuchwepheshe zezimoto ezifuywayo ngesibonelo sezinhlobo eziningana.
Ukuguqulwa "Umholi 12M" kuyisikebhe esihamba phambili esetshenziswe yi-Ministry of Situations Emergency of the Russian Federation kusukela ngo-2010. Kuye kwaqina amandla, ukuzinza okunamandla nokuzibophezela. Ubude bomkhumbi buyi-13.2 wamamitha. Isivinini sokuhamba ngesivinini sinezinama-30, amandla okugcina amandla - amamayela angu-500 ngokuzimela kuze kube amahora angu-72.
Isikebhe "Kasatka 2M". Yenzelwe ukusesha nokukhulula, ukulandelela, kanye nokuzilibazisa nokudoba. Ukuvuthwa komkhumbi kuqinisekiswa yi-foam ngaphakathi komzimba. Amandla nokukhanya komkhumbi unikeza umzimba okhanyayo, onokwethenjelwa we-aluminium ekhethekile. Esikebheni kukhona ukuwa okubanzi. Iilazi zenziwe nge-triplex futhi zifakwa ekhoneni, ezivikela isiqhwala sezulu.
Uyini umehluko phakathi kwesikebhe ne-yacht? Isibonelo, imodeli ethi "Khivus-10" i-amphibian emkhunjini womoya. Le design ikuvumela ukuba isetshenziswe emanzini angajulile, izimpophoma kanye neqhwa elijulile njengopolisi, imithwalo, imithi yezokwelapha noma yezokuvakasha. Liyasetshenziswa kabanzi ezindaweni lapho kunezimo zezulu ezibi kakhulu.
Izici ezihlukile zama-yachts
Izigaba zama-yachts ezihamba ngomkhumbi zihlukaniswa ngokuvumelana nezimo zokuhamba nemiphumela yokuthuthukiswa kwembonini ehambelanayo. Amakilasi avuselelwe futhi athuthukisiwe, ngokusho kwezidingo kanye nezici zokuhamba ngomkhumbi. Okuyinhloko yokwahlukanisa ukukala ukulinganisa ubukhulu bomkhumbi, kanye nezinketho ezithinta ukuhamba kwamanzi nokusebenza. Ngezigaba, ama-yachts ezemidlalo angahlukaniswa ngezigaba eziningana:
Izinhlobo zamazwe ngamazwe;
Okukhethwa kokuqala kusebenza kuma-Olimpiki, lapho ipharamitha echazayo isisindo sedivaysi yokubhukuda. Isigaba samazwe ngamazwe sivame emazweni amaningana. Futhi iklasi likazwelonke lisho ukusetshenziswa komkhumbi endaweni yezwe elithile. Isikebhe sokuhamba ngesikebhe kanye ne-yacht, umahluko phakathi kokuhamba, imishini nezilinganiso, unomgomo ofanayo wokusebenza (ngokusebenzisa amandla okulandelela we injini yangaphakathi yomlilo).
Ijaji elincane lemoto libiza okungenani amayunithi ajwayelekile angama-50-60,000. Kukhetho lokuhamba ngomkhumbi intengo iqala kusuka kuma-euro ayizinkulungwane ezingu-10. Isikebhe esiphezulu, esingamamitha amahlanu ubude, singathengwa ngamadola ayizinkulungwane eziningana. On ukuguqulwa cruise izindleko kuyoba kusuka 100,000 dollar. I-yacht enkulu esetshenzisiwe, izici zobuchwepheshe ezivumela ukuba zisetshenziselwe uhambo olude, inzuzo eningi futhi enokwethenjelwa. Lokhu kungenxa yokuthi ubude bomkhumbi luhlobo lokuqinisekisa ukuthi liqinisekile nokuzinza.
Ukuthenga i-yacht noma isikebhe, kubalulekile ukucabangela ukuthi isikebhe kufanele sigcinwe endaweni ethile ebusika, kuqasha ochwepheshe bezokugcinwa nokusebenza, kanye nokulungisa. Ngaphezu kwalokho, kufanele kukhunjulwe mayelana nezindleko ezibalulekile zezinto zokushisa nezinye izinto zokusebenza. Ngokwesilinganiso, ukulinganiswa kwonyaka ngalowo msebenzi kungenani okungamaphesenti angu-20 enani lomkhumbi.
Manje impendulo yombuzo walokho umkhumbi uhlukile nge-yacht kusobala. Okokuqala, ayihlongozwa ngamakamelo akhethekile, okukhamuluka kakhulu, ingaqhutshwa nge-motor enamathela noma emile. Okwesibili, isikebhe sivame ukuklanyelwa hhayi ukuzijabulisa nokuzijabulisa kuphela, kodwa futhi njengendlela yokukhulula, ukujikeleza noma enye imishini ekhethekile.
I-yacht ngomqondo we-classical iyisitsha sokuhamba ngomkhumbi, esetshenziselwa ukuzijabulisa, ezokuvakasha noma ezemidlalo. Ukuhluka kwezimoto kunezici ezifanayo esikebheni, ngaphandle kwemishini engcono kanye nenduduzo. Impela, umehluko omkhulu yimali. Ngisho i-yacht encane iyinhlangano yokuphakama okubiza kakhulu kunesikebhe esiphezulu futhi akuwona wonke umuntu okwazi ukuyikhokhela.
Ukuzivocavoca okukhethekile kanye nezinyawo zezinyawo
Amabhayisikili Okukhethekile: I-American Quality
I-Univega ibhayisikili iyisiqinisekiso sekhwalithi yaseYurophu, ukulingana nokuthembeka
Hulahup - ukubuyekezwa, izincomo, ukuphikisana
Lodz (Poland). zokungcebeleka
Ingubani - umuntu ohlakaniphile kakhulu emhlabeni?
Ukulungiswa emzimbeni ngemva ukuphulukiswa: incazelo inqubo. Tattoo wamakhaza
Indlebe ubuhlungu ezinganeni: Izimbangela Nemiphumela